i-Breakeven Inkomba ye MT4 - ForexMT4Indicators.com
Amasu we Forex
Amasu we Forex (MT4)
Amasu we Forex (MT5)
Amasu we-Forex Scalping
I-Forex Trend Ukulandela Amasu
Amasu Okuguquguquka Kwe Forex
Amasu wamabhendi e Forex Bollinger
Amasu Okuqhamuka Forex
Amasu Wendlela Yeshadi Lase Forex
Amasu we-Forex Pivot Point
Ukusekelwa kwe-Forex & Amasu Wokumelana
Amasu wezibani ze Forex
Amasu Weshadi We Forex Renko
Forex Swing Ukuhweba Strategies
Izinhlelo Zokuhweba Forex
Amasu Okukhethwa kukho kanambambili
Ukuchazwa Kwamasu e Forex
Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili ze-Forex Swing Trading ezisebenzayo
Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili ze-Forex Scalping Ezisebenzayo
Phezulu 5 Umkhuba Ohamba Phambili We Forex Ukulandela Amasu Asebenzayo
Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ngosuku lwe-Forex ezisebenzayo
5 Izinhlobo Zamasu Okuhweba Kwe Forex Breakout Asebenzayo
Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ezisebenzayo
Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ze Forex ze 2019
Izinhlobo Zamasu e Forex
Izinhlobo ze-Forex MT4 Izinkomba
Izinhlobo Zama-Forex MT4 Izinkomba Eziphumelela Abahwebi Be-Forex Bathembele Ku
Izinkomba ze-Binary Options
Uyemukelwa! Ngena ku-akhawunti yakho
igama lakho lomsebenzisi
Ukhohlwe iphasiwedi yakho? Thola usizo
Phinda uthole iphasiwedi yakho
Iphasiwedi izothunyelwa nge-imeyili kuwe.
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 i-Breakeven Inkomba ye MT4
Izinkomba ze-Forex MT4
i-Breakeven Inkomba ye MT4
Okthoba 10, 2021
Isingeniso ku-i-Breakeven Indicator
1 Isingeniso ku-i-Breakeven Indicator
2 Uyini inkomba i-Breakeven?
3 Isebenza kanjani i-i-Breakeven Indicator?
4 Ungayisebenzisa kanjani i-i-Breakeven Indicator ye-MT4
5.1 Izinkomba ze-MT4 – Landa Imiyalo
5.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
Umgomo wokugcina wokuhweba unenzuzo engaguquguquki ngokuhamba kwesikhathi. Kanjalo, kubalulekile ukuthi abathengisi bazi ukuthi ngabe basenzuzo noma cha nganoma yisiphi isikhathi. Abahwebi abaphatha ukuhweba njengebhizinisi langempela futhi bazofuna ukwazi iphuzu labo lokuqhekeka kubhangqa ngalinye lemali. I-Breakeven Indicator iyithuluzi elivumela abathengisi ukuthi benze lezi zinto ezimbili.
Uyini inkomba i-Breakeven?
I-i-Breakeven Indicator iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso ekhombisa abathengisi intengo ye- "Breakeven" yokuhweba kwabo okuvulekile ngemali ngayinye. Lokhu kusebenza noma ngabe kunezikhundla eziningi zokuhweba ezivulwe ngazimbili zemali eyodwa. Iphinde ikhombise inzuzo noma ukulahleka kubhangqa ngalinye lwemali lapho kunezikhundla ezivulekile, ebhalwe ngaphansi kukanhlokweni we- "Equity". Iphinde ikhombise inzuzo ephelele noma ukulahleka kuwo wonke amabhangqa emali anezikhundla ezivulekile ezisengaphansi kwesihloko se- "Equity".
Isebenza kanjani i-i-Breakeven Indicator?
I-i-Breakeven Indicator imane ibuyise imininingwane ehlobene nezikhundla zokuhweba ezivuliwe kusuka kokuphakelayo komthengisi. Ibuye iqoqele intengo eyehlukanisiwe ngazimbili zemali ngokulinganisa inani lentengo lokungena lokuhweba ngakunye ngenkathi ibeka isisindo esengeziwe ezindaweni zokuhweba ezinosayizi abakhulu bezikhundla. Ngokuqondene nokulingana ngazimbili zemali ngayinye, kumane nje kwengeze inzuzo nokulahlekelwa kubhangqa ngalinye lemali. Ibuye ingeze inani eliphelele lenzuzo nokulahleka kwemali ngayinye enezikhundla ezivuliwe ukufika ku-Total Equity.
Ungayisebenzisa kanjani i-i-Breakeven Indicator ye-MT4
Isikhombi se-i-Breakeven sinezinketho ezimbalwa ngaphakathi kwezilungiselelo zezinkomba zazo okuyizinguquko ezibonwayo.
"I-Corner" ivumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ukuthi iliphi ikhona lweshadi lentengo izikhundla ezivulekile namanani we-breakeven azoboniswa. Izinketho zokufaka zingokulandelayo:
0 - ekhoneni eliphezulu kwesobunxele
1 - ekhoneni eliphezulu kwesokudla
2 - ekhoneni elingezansi kwesokunxele
3 - ekhoneni elingezansi kwesokudla
Yazi ukuthi ukukhetha u- “2” no- “3” okukhombisa idatha emakhoneni aphansi eshadi kuguqulela isibonisi okubeka amalebula ngezansi nengqikithi phezulu.
Ukuguquguquka kwe- “dy” kumane nje kuguqule isikhala phakathi komugqa ngamunye okwenza isibonisi sibe side noma sihlangane kakhudlwana.
I- “_Header”, “_Umbhalo”, “_Data”, kanye nezinketho ze- "_Separator" zimane zivumele abasebenzisi ukuthi bakhethe umbala wombhalo okhonjisiwe.
Le nkomba ayilona uhlobo lwenkomba enikeza izinkomba zokuhlaziywa kwezobuchwepheshe njengamathrendi, umfutho, futhi kusho amathuba okuguqula. Lokho ekuhlinzekayo kumane kuyimininingwane ebonakalayo yokuthi imisebenzi yakho evulekile yenziwa kanjani njengamanje. Kufana nokuba negeji yakho yesivinini kudeshibhodi yakho lapho ushayela imoto yakho.
Abahwebi abakhetha ukusebenzisa amasu okuphatha imali angajwayelekile afana nemartingales, reverse martingale, noma ukulinganiselwa kwezindleko kungakuthola kuwusizo lokhu njengoba bengakhomba kalula intengo ekhiqizwayo okufanele imisebenzi yabo bayifinyelele ukuze okungenani bahlukane nokuvala imisebenzi yabo ngenzuzo. Ingasetshenziswa ngempumelelo ngabahwebi abafaka ezikhundleni zabo ezivulekile ukukhulisa inzuzo njengoba ibuye ivumele ukuthi babone inzuzo yabo isiyonke ngazimbili zemali. Yize le nkomba ingahlinzeki nganoma yiziphi izinkomba zobuchwepheshe, kunabahwebi abaningi abangahle bakuthole kuwusizo lokhu.
Izinkomba ze-MT4 – Landa Imiyalo
i-Breakeven Inkomba ye-MT4 iyi-Metatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Inkomba ye-i-Breakeven yeMT4 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ngokusekelwe kulolu lwazi, abathengisi bangathatha ukunyakaza kwentengo okuqhubekayo futhi balungise isu labo ngokufanele. Chofoza lapha ukuthola amasu e-MT4
Kunconywe i-Forex Metatrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
Umthengisi wamazwe ngamazwe nge 24/7 ukweseka.
Ngaphezulu 12,000 amafa, kuhlanganise Amasheya, Izinkomba, Forex.
Ukwenziwa kwe-oda elisheshayo futhi kusakazeka kusukela 0 amapipi.
Amabhonasi afika $50,000 kusukela kwidiphozithi yokuqala.
I-akhawunti yedemo yokuhlola amasu okuhweba.
Chofoza Lapha Ngesinyathelo Ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokuvula I-akhawunti Yokuhweba ye-RoboForex
Ungayifaka kanjani i-i-Breakeven Indicator ye-MT4.mq4?
Landa i-Breakeven Indicator ye-MT4.mq4
Kopisha i-i-Breakeven Indicator ye-MT4.mq4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Qala noma qala kabusha i-Metatrader yakho 4 Iklayenti
Khetha Ishadi nesikhathi esibekiwe lapho ufuna ukuhlola khona izinkomba zakho ze-MT4
Sesha “Izinkomba Zokwezifiso” ku-Navigator yakho ikakhulu kwesobunxele ku-Metatrader yakho 4 Iklayenti
Qhafaza kwesokudla ku-i-Breakeven Indicator ye-MT4.mq4
Shintsha izilungiselelo noma cindezela ok
Inkomba i-Breakeven Inkomba MT4.mq4 iyatholakala kwi Ishadi yakho
Indlela ukususa i-Breakeven Inkomba MT4.mq4 kusukela Metatrader yakho Ishadi?
Khetha Ishadi lapho i-Indicator isebenza ku-Metatrader yakho 4 Iklayenti
Qhafaza kwesokudla kuShadi
Khetha inkomba bese ususa
i-Breakeven Inkomba ye MT4 (U-downloader mahhala)
Chofoza lapha ngezansi ukulanda:
Isiqephu esedluleJSmooth MA MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoIsibikezelo Oscillator Inkomba MT4
IZIHLOKO EZIHLOBENEOkuningi ngokuvela kumbhali
High Low Zigzag Indicator for MT4
Isikhombi se-Delta se-MT4
FRAMA Inkomba ye-MT4
Inkomba yefulegi nephethini ye-Pennant ye-MT4
Inkomba ye-TEMA ye-MT4
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4
Sicela ufake umbono wakho!
Sicela ufake igama lakho lapha
Ufake ikheli le-imeyili elingalungile!
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili lapha
Gcina igama lami, imeyili, kanye newebhusayithi kulesi siphequluli ngokuzayo lapho ngiphawula.
Sesha Izinkomba ze-Forex & Amasu
Top Thwebula MT4 Izinkomba Uhlu
Inkomba ye-Infoboard ye-MT4
Disemba 17, 2020
Isibonisi seTMA Slow Indicator seMT4
Renko Amashadi Inkomba MT4
Novemba 9, 2020
Inkomba ye-MA BBands ye-MT4
B-iwashi nge Ukusabalala – inkomba MetaTrader 4
Okthoba 24, 2014
Ukuchazwa Kwamasu Okuhweba Forex
Isu le-Forex RSI Lichazwa Ngezibonelo
Okthoba 5, 2016
Julayi 20, 2020
Forex Ukuhweba Nge EUR / JPY
Januwari 8, 2020
Isu Lokuhweba Ngesiteshi se Forex lichazwe ngezibonelo
Novemba 5, 2017
Ukuhweba Forex Nge GBP / JPY
Kunconywe Abashintshi Abaphezulu be-Forex
Ukubuyekezwa kwe-XM Broker 2021 – Kumele Ufunde! Ingabe i-XM iphephile ...
Novemba 9, 2019
Ukubuyekezwa kwe-FXOpen Broker 2021 – Kumele Ufunde! Ingabe iFXOpen Safe ...
Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti ye-XM Yokuhweba
Mashi 26, 2020
Umhlahlandlela wokuvula i-akhawunti ye-RoboForex
Novemba 11, 2021
RoboForex Broker ukubuyekeza 2021 - Kumele Ufunde! Ingabe RoboForex Ube ...
Ukubuyekezwa kwe-FBS Broker 2021 – Kumele Ufunde! Ingabe i-FBS iphephile ...
Januwari 7, 2020
I-ForexMT4Indicators.com iyiqoqo lamasu we-forex, izinhlelo, Izinkomba ze-mt4, izinkomba ze-mt5, ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kanye nokuhlaziywa okuyisisekelo ekuhwebeni kwangaphambili. Ungathola futhi amasistimu we-scalping njengamathrendi, ukuguqulwa, amanani entengo. Ukuhweba ngesikhathi esibekelwe njenge 1 Iminithi ekuhwebeni kwesikhathi eside nakho kunikezwa lapha. Sihlose ukuba yindawo lapho bonke abathengisi be-forex bangathola khona izinsizakusebenza mayelana nokuhweba.
Open Zone Breakout Forex Trading Strategy
Disemba 1, 2021
Exp Spearman Rank Correlation Histogram MT5 Indicator
Novemba 30, 2021
Izinkomba ze-Forex MT54357
Izinkomba ze-Forex MT42330
Amasu we Forex1109
Amasu we-Forex Scalping321
I-Forex Trend Ukulandela Amasu169
Amasu Okuhweba Okukhethwa kukho kanambambili153
Izinhlelo Zokuhweba Forex129
Forex Swing Ukuhweba Strategies69
Amasu Okuqhamuka Forex68
Igama lomsebenzisi noma i-imeyili
Ukukhangisa nge Forex
© 2021 ForexMT4Indicators.com. Wonke Amalungelo Agodliwe.
UTim Morris - Disemba 1, 2021 0
KUBONAKALA: "Indlela "Hack" A Popular Forex Inkomba Futhi Cindezela Njalo Kugcine PIP Out Of The Market ... Manje!"
Thola Ukufinyelela Okusheshayo!
Sicela wabelane ngendawo yakho ukuze uqhubeke.
Bheka okwethu umhlahlandlela wosizo ukuthola eminye imininingwane.